मानव बस्तीमा आगलागीको त्रासद घटना वर्षैपिच्छे भइरहँदा पनि सरकारले रोकथाम र पुनःस्थापनाप्रति मात्र हैन उद्धारमा समेत उदासीनता देखाउँदैआएको छ। आगलागीमा सिंगै गाउँ खरानी हुँदा समेत सरकारबाट नाममात्रको सहयोग पाउन पनि पीडितले कागजी औपचारिकता आफैँले पूरा गर्नुपर्छ।
पाठ्य पुस्तक पुर्‍याउ !
सामुदायिक विद्यालयमा बेलैमा पाठ्यपुस्तक नपुग्ने नेपालको पुरानै समस्या हो। यस पटक त झन् शैक्षिक सत्र सुरु हुन केही दिनमात्र बाँकी हुँदासम्म पनि सातवटा हिमाली जिल्लाबाहेक अन्यत्र पाठ्यपुस्तक वितरण नै अन्योलमा परेको छ।
पेट्रोलियम अभावको गोलचक्कर
केही दिन पहिले पेट्रोलियम पदार्थ मूल्य बढाइयो। केही विद्यार्थी संगठनले राजधानीकै सडकमा मूल्य वृद्धिका विरोधमा सवारी साधन तोडफोड र आगजनी गरे।
राजमार्गमात्र हैन भित्री सहरी सडक पनि सवारी चालकको हेलचेक्य्राइँ र उद्दण्डताका कारण अत्यन्त असुरक्षित बन्दैगएका छन्।
सत्य निरुपणको औचित्य
मानवताविरुद्धको जघन्य अपराधलाई ढाकछोपै गर्ने नियतले बनाउने हो भने सत्य निरुपण आयोगको औचित्य सिद्ध हुनसत्तै्कन। सम्भवतः यही कारणले सरकारले तयार गरेको ऐनमा रहेका त्रुटि सच्याएर कानुन बनाउने आदेश सर्वोच्च अदालतले दिएको हो।
अब अलमल नगर!
30 Mar 2014 | आइतबार १६ चैत्र, २०७०
संविधान सभामा पहिलो संविधान सभाका निर्णयको स्वामित्व ग्रहण प्रक्रिया विधिवत् थालिएको छ। पहिलो संविधान सभा अवसान संविधान निर्माणै नगरी भएको थियो।
केही वर्ष यता नेपालमा सहकारी घरघरमा चिनिने संस्था भएको छ। तर सहकारी नेपालका लागि नयाँ सोच भने होइन। सयौं वर्षदेखि प्रचलित गुठी, ढिकुटी, भकारीआदि सहकारीकै प्रारंभिकरूप हुन्।
पहिलो संविधान सभा विफल हुनुमा सहमतिका नाममा गरिएको विधि, प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक मान्यतालाई उपेक्षा गर्ने अभ्यासको प्रमुख भूमिका रहेको थियो।
राष्ट्रिय सेनालाई विश्वास
नेपालमा जनताको अधिकार कहिल्यै पूर्णरूपमा सुरक्षित हुनसकेको छैन। वि.सं. २००७ सालमा आएको प्रजातन्त्रले राणालाई हटाएर देशको सत्ता शाह राजाका हातमा पुर्‍यायो, जनताले सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्न पाएनन्।
संविधान सभाको कार्यसञ्चालन
पहिलो संविधान सभामा धेरै समिति हुँदा कामकाज प्रभावकारी नभएको अनुभवले दोस्रो संविधान सभामा समितिको संख्या घटाइयो। संख्या घटेपछि सबै सभासद्लाई कुनै न कुनै समितिमा समेट्नुपर्ने प्रावधानले समितिहरूको आकार भने निकै ठूलो हुने भएको छ।